के हरेक दिनको यौनसुखले तनाव कम हुन्छ ? यस्तो छ एउटी महिलाको सुनसनीपूर्ण अनुभव | Rajmarga
के हरेक दिनको यौनसुखले तनाव कम हुन्छ ? यस्तो छ एउटी महिलाको सुनसनीपूर्ण अनुभव
अधिकांश मानिसहरुजस्तै म पनि आफ्नो स्वास्थ्य र सुखको ख्याल राख्दछु । गत वर्ष मैले निर्णय गरेको थिएँ कि मैले आफ्नो छालालाई सुन्दर बनाउनुछ । मैले यो निर्णय पनि गरे कि जीवनलाई तनावमुक्त राख्नुछ र हरेकप्रकारले चमक बनाइराख्नुछ । तर मैले यसका लागि जीम गएर पसिना बनाउने र खानपिन सुधार्नुको साटो दोस्रो बाटो चुने, त्यो थियो हस्तमैथुन ।
जब तपाई कामुकताले भरिएको हुनुहुन्छ तब शरीरबाट ओक्सिटोसिन हार्मोन रक्तप्रवाहमा समाहित हुन्छ । आक्सिटोसिनलाई समान्य रुपमा ‘प्रेम’ या ‘आलिङ्गन’ हार्मोन भन्ने गरिन्छ । यसले मानसिक तनावलाई कम गर्न सक्दछ।
यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि सन् २००६ मा एउटा पुस्तकले २६०० महिलाहरुबीच हस्तमैथुनका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यसमध्ये ३९ प्रतिशत महिलाहरुले भनेका थिए कि उनीहरुलाई हस्तमैथुनबाट राहत प्राप्त हुने गर्दछ ।
मैले एक वर्षसम्म हरेक दिन आफ्नो कामुकता चरमोत्कर्षमा पुराउने संकल्प गरेँ । हालै मेरो ब्वाइफ्रेन्डसँग म अलग भएकी थिएँ । उनी मसँग लामो समयदेखि थिए, यो सम्बन्ध अन्त्य भएपछि म भित्रभित्रै टुटेकी थिएँ ।
यसको असर मेरो स्कीनमा पनि परेको थियो । मैले कयौ उपाय लगाएँ । तर सबै बेकार सावित भयो । यी उपायहरुबाट म स्वयमलाई थकित पाउन थालेँ । मानसिक तनाव बढ्दै गयो । यो सबैका बिच मेरा लागि त्यो रात विस्मयकारी रह्यो, जब म जागेँ तब त्यो मेरो विल्कुल नयाँ बिहान थियो । मेरो छालामा गज्जबको चमक थियो ।
मैले आफ्नो छालालाई लिएर करिब एक वर्षदेखि जुझिरहेकी थिएँ । मसँग स्कीनका कयौ डक्टरले भनेका थिए कि मानसिक तनाव कम गर्नु जरुरी छ । उनीहरुले हार्मोनल असन्तुलन पनि क मगर्न भनेका थिए। कयौ यस्ता कुरा थिए, जुन मेरो नियन्त्रणमा थिएन । मैले गुगलमा सबै विषयमा अध्ययन गरेँ । मैले यो कुरा पनि सर्च गरेँ कि के कामुकताबाट स्कीन प्रभावित हुन्छ ?
यसका बारेमा मैले धेरै कुरा पाएँ । कुरा सिधा थियो कि सेक्सबाट मानसिक तनाव कम हुन्छ । यो यसकारण पनि कि सेक्सका क्रममा शरीरबाट तनाव उत्पन्न गराउने हर्मोन्स बाहिर निस्कने गर्दछ ।
जब यस्तो हुन्छ तब स्कीन बिग्रने र डन्डीफोर आउने आशंका पनि कम हुन्छ । यद्यपि कयौ मानिस यो तर्कमा असहमत छन् । यदि सेक्सबाट स्कीन सुन्दर बनाउने र तनाव कम गर्न सहयोग पुग्छ भने यसलाई एक वर्ष प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ । र यसको निश्चित परिणाम महशुस गर्न सकिनेछ ।
मेरा लागि पहिलो साता रमाइलो रह्यो । यद्यपि म सेक्सका क्रममा सधै चरम अवस्थामा हुँदिनँ। मलाई थाहा छ कि यसलाई एक्लै कसरी अन्जाम दिन सकिन्छ । यो एकप्रकारको फ्यान्टासी हो र यसमा औंलाहरु आवश्यक हुन्छ ।
यो होइन कि मेरो स्कीनमा तत्काल कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तन आयो । तर मैले यसमा केही राम्रो महशुस गरेँ । म सामान्य रुपमा रातमा ओछ्यानमा वासनासँग निप्टेकी छु । त्यसपछि म आरामसँग निद्रामा जान्छु । मेरा लागि यसमा उदासी र अफसोसको कुनै भावना आउँदैन ।
म आफ्नो फ्यान्टासीलाई एउटा विशेष स्तरसम्म लैजान्छु । म सामान्य पुरुषका साथ सेक्सको कल्पना बन्द गरिदिन्छु । म स्वयमलाई रियोपैट्रा सम्झन्छु र मेरा सबै नोकर वासनामा उल्झेका हुन्छन् । मेरा साथीहरुलाई यो ठट्टा लाग्छ । यही दोस्रोतर्फ केही मित्र स्वयमबाट कामुक सुख हासिल गर्नका लागि प्रेरित भए ।
तर केही महिनापछि म यसबाट अघाएँ । यो रुटिनजस्तो लाग्न थाल्यो । म पनि यसलाई त्यसरी नै चाँडै निप्टाउन थाले । मैले स्वयमलाई नै धोका दिन सुरु गरेँ । मैले स्वयमलाई भन्न थाले कि आज विदा छ । मेरा लागि हस्तमैथुन अहिले पनि कयौपटक मज्जाका लागि हुन्छ ।
मलाई अहिले पनि हस्तमैथुनको तिब्र इच्छा हुन्छ । यस्तो एक दिनमा कयौपटक हुन्छ । कयौ पटक यस्तो हुन्छ कि कुनै कुनै दिन बिल्कुल मन लाग्दैन । तर कुल मिलाएर मेरो संकल्प मेरा लागि बोझ बन्यो । मेरा लागि जीम जानु पनि सहज थिएन । यो सबैका बावजुद लाग्यो कि अरु पनि कयौ राम्रा चिज छन् जुन गर्न सकिन्छ ।
गत गर्मीमा मैले यसलाई पाँच महिनासँम्म जारी राख्ने निर्णय गरेँ । यसपछि म एउटा रोमान्टिक विदामा गएँ र मेरो पूरै धारणा बदलिया । कम समयको यो रिलेशनसीपलाई मैले खुब इन्जोय गरेँ । मलाई लाग्यो कि जुन मैले विगत केही महिनादेखि गरिरहेकी थिएँ, त्यसको पनि योगदान छ ।
जब म घर फर्किएँ तब मेरो छालामा गज्जबको चमक थियो । मैले फेरि एउटा नयाँ संकल्पका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेँ –म स्वयमलाई हरेक दिन कामुकतामा लोतपोत गर्न बाध्य पार्नुको तुलनामा म लागेका बेला यसलाई अन्जाम दिनेछु । मेरो नयाँ लक्ष्य गुणवत्तामा आधारित थियो न कि बढीपटक गर्नुमा ।
मैले सातामा एक वा दुईपटक यसो गर्न सुरु गरेँ । कतिपय साता एकपटक पनि गरिनँ । यो मेरा लागि फेरि मज्जाको बन्यो । म यसलाई कुनै काम जसरी गरिरहेकी थिइनँ । बरु मनबाटै र मन लाग्दा मात्र गरेँ । यसको नतिजा यो भयो कि मेरो जीवनमा तनाव निकै कम भयो ।
मेरो स्कीन सुन्दर देखियो । म स्वयमलाई शान्त, अहम र स्वस्थ महशुस गर्न थाले । मेरो कामुकताले मेरो जीवनलाई सही बाटोमा ल्ययो, जसको म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । म सेक्सका क्रममा के चाहन्छु यस्ता प्रश्नबाट मलाई अब कुनै लज्जाबोध हुँदैन ।
मलाई आफ्नो यौन फ्यान्टासी शेयर गर्दा कुनै समस्या हुँदैन । मलाई नयाँ सेक्स टोयज गर्न अब डर पनि लाग्दैन । मेरो कामुकताले मलाई खुसी र स्वस्थ बनायो–जुन म सधैं चाहन्थेँ। मेरा लागि आगामी ३६५ दिन पनि छन् । बीबीसी थ्रीको राधिका संगानीसँगको कुराकानीमा आधारित ।
Previous post: दिसा नगरी मानिस कति दिन बाँच्न सक्ला ? एक जना व्यक्तिका कारण बेलायती प्रहरी यसरी हैरान !
Next post: रश्मीले हल्लाइन् पोखरा !